How'd it happen and more reports?: မြန်မာ့ နှင့် အာရှ နိုင်ငံ အလုပ်ချိန်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ထူးထူးခြားခြားကွာခြားချက်?
မြန်မာ့ နှင့် အာရှ နိုင်ငံ အလုပ်ချိန်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ထူးထူးခြားခြားကွာခြားချက်?
အံ့သြစွာ မြန်မာ့ နှင့် အာရှ နိုင်ငံ အလုပ်ချိန်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ထူးထူးခြား အလုပ်ချိန် တနှစ်မှာ ၂လလောက်ကို ကွာခြားလျော့နည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ!
Working Time - ၃၅ နာရီ/တစ္ပတ࿿(၉း၃၀ မွ ၄း၃၀ အထိ)
(ထမင်းစားချိန်၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ချိန်၊ အခြားကိစ္စများ အပါအဝင်)
Working Day - ၅ ရက်࿿/တပတ် (တနင်္လာ မှ သောကြာ အထိ)
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက် - ၂၆ ရက်/တစ်နှစ်
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် - ၉၆ ရက်/တစ်နှစ်
တစ်နှစ်မှာ ပိတ်ရက်စုစုပေါင်း ၁၂၂ ရက်၊ ရက်ထပ်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်မှာ ၄ လ အနားရ၊
မှတ်ချက် - အချို့သော ဌာနများ မပါဝင်။
တရက်ကို ၇း၃၀ နာ၇ီဘဲရှိတယ်၊ မနက်စာစား ၉း၃၀ရုံးလာ မနက်စာစားပြီးချိန် ၁၀း၀၀ရှိနေပြီ. ၁၀း၀၀~ ၁၂း၀၀ ထိ ၂နာရီဘဲ အလုပ်လုပ်ချိန်ရှိတော့တယ်၊ နောက်နေ့လည်စာကို ၁၂း၃၀~၁၃း၀၀ ၊ ၁၃း၀၀~၁၆း၀၀ထိ ၄နာရီဘဲ အလုပ်လုပ်တယ်...တရက်မှာ ၆နာရီဘဲရုံးမျာ အလုပ်လုပ်တယ်ဗျ...
တပတ်ကို ၃၅ နာရီ..တလမှ ၁၄၀ နာရီဘဲရှိတယ်၊ (နိုင်ငံတကာက OECD အုက်စုတွေက တပတ် 37 နာရီဗျ) OECD ဆိုတာက ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ အလုပ်ချိန်ပါဗျ။
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (French: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE) is an intergovernmental economic organisation with 35 member countries, founded in 1960 to stimulate economic progress and world trade. It isaforum of countries describing themselves as committed to democracy and the market economy, providingaplatform to compare policy experiences, seeking answers to common problems, identify good practices and coordinate domestic and international policies of its members. Most OECD members are high-income economies withavery high Human Development Index (HDI) and are regarded as developed countries.
ဖွံ့ဖြိုးအောင်မြင်နေတဲ့ အာရှက စင်ကာပူ၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် ကိုးရီးယားတွေတော့ ၄၄ တပတ်ကိုနာရီပုံမှန် အလုပ်ကျတယ်ဗျ!
ဖွံ့ဖြိုးစ အာစီယံ ဗီယက်နမ်နှင့် ကမ္ဘာဒီးယား ဆိုရင် မနက် ၇း၃၀ ~ ၁၆း၃၀ထိ တရက် ၈ နာရီဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ တပတ်ကို ၆ ရက် (၄၈ )နာရီတောင်လုပ်ဆင်းကျတယ်၊ တပတ်မှာ တစ် ရက်ဘဲ နားရက်၇ှိတယ်ဗျ၊
တလ(၁၉ ၂) နာရီ နှင့် တနှစ်ကို(၂,၁၈၄) နာရီ အလုပ်လုပ်ကျတယ်ဗျ၊
ဒါတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အမိမြေက လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အာရှစက်မှုနိုင်ငံတွေကို ယှဉ်နိုင်
တပတ်ကို တရက်လောက်အလုပ်ခချိန် နစ်နာနေပြီ၊ တလဆို ၅ရက်ကွာနေပြီလေ၊ တနှစ်ဆို ၂လလောက် အလုပ်ချိန်ကွာခြားနေပြီဗျ၊ ဘယ်လောက်နစ်နာနေလဲ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မှသိတာတော့တယ်လေ!
အခုမှာ လွတ်လပ်သောအရင်းရှင်းဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်ကိုကူးပြောင်းရန်ကြိုးအားထုတ်နေချိန်မှာ
အာစီယံဈေးကွက်နှင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ဝင်ဖို့ ကျိုးစားနေတဲ့ တပိုင်တနိုင် အမိမြေကSME လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ဘယ်လောက် အချိန်တွေ နစ်နာနေလဲ သတိထားမိကျလားတော့မသိဘူးဗျ?
ဘယ်လိုနည်းနှင့် စင်ကာပူကိုကျော် အနှစ် ၂၀ ကြာရင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါမလဲဗျ?
လက်တွေ့ကျကျ တကယ်တတ်ကျွှမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေနှင့် သေချာ စီမံကိန်းချပြီး နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကို လိုအပ်နေတဲ့ လုပ်အားအတွက် ကျွှမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအမြောက်အများနှင့် လူတော်လူကောင်းပညာတတ်တွေကို စနစ်တကျ မွှေးထုတ်နိုင်ပြီး အုပ်စုလိုက် အလုပ်လုပ်တတ်ရန်နှင့် မိမိတာဝန်ယူထားတဲ့ အလုပ်အတွက် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံတတ်တဲ့အကျင့်တွေ မွှေးထုတ်သင့်ပြီဗျ၊ဒါမှလဲ နောက်အနာဂတ်
တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လူငယ်လေးတွေကိုခေတ်ပညာတတ်တွေ မွှေးထုတ်နိုင်ရန်အလွန် အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပါဗျ။
နောက်ပျက်စီးနေတဲ့ တရားဥပဒေတွေနှင့် အကျင့်ဆိုးလူနေမှုစရိုတ်တွေ အရိုးစွဲနေတဲ့ရိုးရာအတွေးအခေါ်အကျင့်ဆိုးတွေ၊ ခေတ်နှင့် မသင့်တော်တော့တဲ့ အယူအဆတွေကိုလဲ ပြောင်းလဲသင့်တဲ့ အချိန်အခါရောက်နေပါပြီ၊ တိုင်းံပြည်ချစ်တဲ့ မျိုးချစ်စတ်တွေကို မွှေးထုတ်ရန်လဲ အရမ်းကို လုိုအပ်နေပါပြီ၊
Singapore maintains its no 1 ranking in longest working hours in the world
In the latest Ministry of Manpower (MOM)’s quarterly Labour Market report, it was revealed that Singapore has an average of 2389.4 hours in 2014. The result continue to place Singapore in its number one position in the longest working hours in the world. From results in recent years, Singapore’s nearest Asian competitors in long working hours are Taiwan (2,163), Japan (1,735 hours) and South Korea (2,193 hours).
By labour legislation, Singapore has also the worst maximum working hours in the world capped at 88 hours for two continuous week.
South Korea has the fastest declining working hours in the world, as the government increases its public holidays to 16 days in 2013. Japan is also decreasing its working hours by lowering its legislated working hours limit and increasing its legislated paid holidays to 18.5. Taiwan is also reducing its working hours in 2016 by cutting work week to 40 hours.
Other countries are trying to bring down their working hours and placing higher importance onawork-life balance, however in Singapore, Prime Minister Lee Hsien Loong has this caution for Singaporeans:
Labels: စီးပွားရေး, အလုပ်အကိုင်, ငွေကြေး